Amaqabane | Shandong Dingtaisheng Oomatshini Technology Co., Ltd.
I-Royal Foods iVietNam Co., Ltd. yenye yezona mveliso zinkulu zeCannard Sardine, iMackerel kumazwe akumazantsi mpuma eAsia, phantsi kwegama lebrendi elithi "Three Lady Cooks Brand" ethe yamkelwa kwihlabathi jikelele.
Inkampani yaseKhanh Hoa Salanganes Nest lelona shishini likhokelayo kulawulo nasekuxhatshazweni kwezixhobo zendalo ezixabisekileyo eVietNam. Ngaphezulu kweminyaka engama-20 yophuhliso oluzinzileyo, iNkampani yeKhanh Hoa Salanganes Nest iye yahlala isenza umzamo wokuvelisa kunye nokwahlula uluhlu lweemveliso zayo ukwazisa iimveliso ezikumgangatho ophezulu kwintengiso kunye nokuzisa ixabiso lesondlo kwindlwana yeesalanganes kubathengi.
Iqela leMayora emva koko lasekwa ngokusesikweni ngo-1977 kwaye ukusukela ngoko likhule laba yinkampani eyaziwayo kwilizwe jikelele kushishino lweMpahla yeMpahla yabaThengi ekhawulezayo. Injongo yeqela leMayora kukuba lolona khetho lukhethwayo lokutya kunye nesiselo ngabathengi kunye nokubonelela ngexabiso elongezelelekileyo kubachaphazelekayo nakwimo engqongileyo.
Amaphiko athathelwa ingqalelo njengeqela elomeleleyo nelilumkileyo e-Indonesia elinamandla athile ekwenziweni kwesepha kunye nesepha. Iimveliso zamaphiko zamkelwe kumgangatho wazo kunye nokufikeleleka, kwaye ziyafumaneka ngokulula.
Ngombulelo koomatshini abakumgangatho ophezulu we-DTS kunye nenkonzo ebalaseleyo, i-DTS yafumana ukuthembela kwiiWings, ngo-2015, iiWings zazisa ii-DTS retorts kunye nokupheka umxube wokulungiselela iingxowa zabo zokwenza i-noodle kwangoko.
Njengomenzi ophambili waseThailand kunye nomthumeli wempahla esemgangathweni ekumgangatho ophezulu weemveliso zecoconut, i-mfp ibonisa umgca wemveliso ebanzi ukusuka kubisi lwekhokhonathi kunye nekhrim, ijusi yekhokhonathi, izicatshulwa zekhokhonathi, ukuya kwioyile yekhokhonathi enyulu.
Okwangoku, inkampani ivelisa phantse i-100% yengeniso yayo kuthumelo kumazwe angaphandle ukuya kwiimarike kwihlabathi liphela-kubandakanya nezo ziseYurophu, Australasia, Middle East nakwimimandla ekuMantla Merika.
"I-EOAS" ligama elifanayo neoli yeziqholo ukusukela ngo-1894. Ukusukela ngo-1999 i-EOAS ibekwa kwelona lizwe likhulu njengelona lifunekayo ekuthumeleni i-oyile eSri Lanka. Ukusukela kunyaka ka-2017, i-EOAS ine-buniness entsha yobisi lwekhokhonathi enkonkxiweyo.i-DTS ibonelela ngezixhobo ezivela kwi-filler seamer, retort, loader unloader dryer, labeler njl njl. ukwandisa iimarike zabo.
ICeylon Beverage Can yasekwa ngonyaka ka-2014 njengezitena ezimeleyo zealuminium kwaye iphelisa umenzi wayo oseColombo Sri Lanka. Kwiprojekthi yabo yekofu enkonkxiweyo ethi i-OEM yeNestle, i-DTS ibonelele, isothule umthwalo ngokuzenzekelayo, itroli yombane njl.
IiBrahim (uphawu lweDewina Food Industries) ziyafana nokutya okumnandi, okulungeleyo, nokulungele ukutyiwa. Sinikezela ukubola kwenzalo kubo, endaweni yegama laseJapan. I-retort isebenzisa okuhle kakhulu kwaye xa ithelekiswa nomnye umvelisi wokubuyisa waseJapan, umthengi unika uxabiso oluphezulu kwi-DTS njengezantsi:
I-Delta Food Industries i-FZC yiNkampani yeNdawo yasimahla esekwe kwisikhululo senqwelomoya saseSharjah, e-UAE esekwe ngo-2012. Uluhlu lwemveliso yeDelta yokutya yeFZC ibandakanya: Uncamathisela iitumato, iitumato zetchup, ubisi olumphunga, icream engenazintsholongwane, isosi eshushu, umphunga wobisi opheleleyo, Oats, Cornstarch, kunye neCustard Powder. I-DTS ibonelela ngeeseti ezimbini zokutshiza amanzi kunye nokujikeleza okujikelezayo kobisi lwe-evaporated kunye nekhrimu.
Kwi-2019, i-DTS iphumelele iprojekti yekofu esele ilungile yokusela yenkampani yaseNestlé Turkey OEM, enikezela iseti epheleleyo yezixhobo zamanzi okutshiza ukujikeleza kwenzalo, kunye nokufaka umatshini wokugcwalisa i-GEA e-Itali naseKrones eJamani. Iqela le-DTS liyanelisa ngokungqongqo iimfuno zomgangatho wezixhobo, izisombululo ezingqongqo nezicokisekileyo zobugcisa, ekugqibeleni iphumelele indumiso yomthengi wokugqibela, iingcali zaseNestlé ezivela eUnited States naseMzantsi Melika.
I-Bonduelle yayiluphawu lokuqala lwemifuno eshicilelweyo eFrance ukwenza ulwahlulo olwahlukileyo lwemifuno enkonkxiweyo ebizwa ngokuba yiBonduelle "Touche de," enokutyiwa ishushu okanye iyabanda. Isithsaba sasebenza kunye noBonduelle ukuphuhlisa le nxalenye yokupakisha ilayini equka iintlobo ezine ezahlukeneyo zemifuno: iimbotyi ezibomvu, amakhowa, ii-chickpeas kunye nombona oswiti.